Jijjiiramoota hunda fayyadami akkasumas masakiichaas cufa.
Xiyyicha soojoowwan tokko tokkoo cina jiran caqasuun kamshaa banta. Kamshichaa sosochoosuuf, kabala matadurichaa harkisi. Battaluma qabdu hantuutttee gadhiisteen, kamshaan iddoo haaraatti hafa. Kamshaa mataduree gara iddoo biraatti harkisi, ykn gara qarree foodichaa, bakka kamshichaatti itti hidhamutti harkisi.Cuftuu foodaa soojoo caqasuun kamshaa cufi. Kamshaa dabalataan akka mul`atu gochuuf Ilaali - Kamshaalee - (maqaa kamshaa) fili.
Qaaqa keessa gara fulduraatti yoo cuqaafte, qabduun kun itti aanee jedhama. Fuula jalqabaa irratti qabduun maqaa Jijjiiri qaba. Jijjiirraan qabduu cuqaasuun raawwatama.
Qaaqa cufee jijjiiramoota mara ol kaa'a.
Jijjiiramoota caancala ammeetiif ta'an gara warreen yeroo qaaqni kun banametti hojiirra olanitti haaroomsa. Gaafatni dhugoomsuu yeroo qaaqa cuftu hin mul'atu.
Gatiiwwan foyyaa'an gara gatiiwwan durtiitti haaromsa.
Gaafatni dhugoomsuu hin mul'atu. Yoo qaaqa TOLE dhaan dhugoomsite qindaa'inootni hundi qaaqa kana keessa jiran ni haaroomu.
Gatiiwwan mul'atoo qaaqa keessaa gara gatiiwwan ijaarsa durtiitti deebisee haaromsa.
Title is: Qabdoota-Irradaddebiin Fayyadaman